Duub jilibka Shiinaha oo leh warshad baako baraf ah iyo soosaarayaasha | Huanyi
CAAFIMAAD XANUUN XANUUN BADAN: Bartilmaameedka labada dhinac hore iyo gadaal ee jilibka oo leh cadaadis la hagaajin karo iyo daaweynta kulul ama qabow, barafka jilibka qabow wuxuu si wax ku ool ah u yareeyaa bararka, xanuunka iyo caabuqa daalka muruqa, dhaawaca ama qalliinka. Jilbaha jilicsan ee jilicsan ayaa sidoo kale bixiya gargaar raaxo leh oo loogu talagalay murgacashada iyo muruqyada, ACL, arthritis, dhaawacyada isboortiga, qalliinka iyo waxyaabo kale oo badan.
KHATARO AMA DARAN QARAN Waxaa ku jira xirmooyinka jel ee laga saari karo daaweynta kulul ama qabowga. Baakad kasta si fudud ayey ugu dhacdaa jeebka. Xirmooyinka guluubka aan sunta lahayn waa kuwo dib loo isticmaali karo, oo aan caddayn karin oo aan lahayn cinjirka.
CAAFIMAAD XANUUN XANUUN BADAN:Bartilmaameedka labada dhinac hore iyo gadaal ee jilibka oo leh cadaadis la hagaajin karo iyo daaweynta kulul ama qabow, barafka jilibka qabow wuxuu si wax ku ool ah u yareeyaa bararka, xanuunka iyo caabuqa daalka muruqa, dhaawaca ama qalliinka. Jilbaha jilicsan ee jilicsan ayaa sidoo kale bixiya gargaar raaxo leh oo loogu talagalay murgacashada iyo muruqyada, ACL, arthritis, dhaawacyada isboortiga, qalliinka iyo waxyaabo kale oo badan.
KHATARO AMA DARAN QARANWaxaa ku jira xirmooyinka jel ee laga saari karo daaweynta kulul ama qabowga. Baakad kasta si fudud ayey ugu dhacdaa jeebka. Xirmooyinka guluubka aan sunta lahayn waa kuwo dib loo isticmaali karo, oo aan caddayn karin oo aan lahayn cinjirka.
1.10 Waaya-aragnimada OEM, ODM. Waxaan u habeyn karnaa qaabka, suunka, astaanta, xirmada iwm, ayaa ku siin kara talo soo jeedinno xirfad leh isla markaana horumarin karna xalka ugu fiican ee alaabtaada.
2. Warshaddu waxay leedahay in ka badan 20 Khadadka Waxsoosaarka, alaab ceeriin oo badan iyo midabyo midab leh, aqoon isweydaarsiga Silkscreen wuxuu la kulmi karaa shuruudahaaga astaanta, waxaan sidoo kale caado u nahay bacda waajibka ah annaga oo isku duuban inaan alaabtaada nadiif u noqon karno.
3. Xakamaynta tayada xad dhaafka ah si aad u hubiso inaad heli doonto badeecada lagu qancay.
4.Waayo kuwa jilibka lagu duubo baakad baraf ah, anqaw, curcurka, kubka, dhexda, cagaha, garabka barafka garabka, warshadeena waxay leeyihiin cabirro iyo qaabab kala duwan oo aad u dooratay, waxay ku haboonaan karaan dad badan.
5.Factory ertified: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI
Hore: xirmo kulul oo qabow
Xiga: Xirmooyinka barafka carruurta
Xidhmada Barafka Jilibka Ugu Fiican
Duub Jilib Qabow
Duub Jilib Kulul
Baraf Baraf Jilibka
Duubista Barafka Ee Jilibka
Jilibka Gel Pack
Xidhmada Barafka Jilibka
Duub Jilib oo wata Baakad baraf ah